‘जिन्दगीसँग गुनासो गर्ने फुर्सद नै छैन’
Tuesday,26 May, 2020 | १३ जेठ २०७७
अपडेटः १३ जेठ २०७७ । ८:५० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np
सागर चन्द काठमाडाैं १३ भदाै
चिकित्सकहरुलाई ‘धरतीका भगवान’को रुपमा चित्रित गरिन्छ । भगवानले एकपटक जीवन दिएका हुन्छन् । यसरी भगवानले एक पटकको लागि दिएको जीवन चिकित्सकले बारम्बार बचाउँछन् । संसारमा यस्ता कैयौं उदाहरण छन् जहाँ चिकित्सकले मृत्युलाई चुनौती दिँदै जीवन बचाएका छन् । बहिरालाई श्रव्य शक्ति दिएका छन्, दृष्टिविहीनलाई ज्योति दिएका छन् । अंगभंगलाई सबल बनाएका छन् ।
यस्तै अलौकिक र उदाहरणीय काम गरेर विश्वभर ख्याति कमाएर चिकित्सक हुन् सन्दुक रुइत । हाम्रो लागि अत्यन्तै गर्वको कुरा, उनी नेपाली हुन् ।
चिकित्सक हुन ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । महँगो पढाइ भएका कारण चिकित्सक उपाधि हाँसिल गरेपछि पैसा कमाउनमै धेरै चिकित्सक अग्रसर हुन्छन् ।
तर, डा. सन्दुक रुइत पैसालाई कम र मानवीयतालाई बढी महत्त्व दिने स्वाभावका भएकाले उनको तारिफ विश्वभर हुने गरेको छ ।
विश्वका चर्चित सञ्चार माध्यमले डा. रुइतलाई विभिन्न उपमा दिँदै उनको पुण्यकर्मको प्रशंसा गरेका छन् । बीबीसीले उनलाई ‘मनकारी डाक्टर’को संज्ञा दिएको छ । अल्जजिराले उनलाई ‘दृष्टिदाता’को संज्ञा दिएको छ ।
डा. रुइतले मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया गर्न आविष्कार गरेको प्रविधि तीन दर्जन बढी देशले प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘रुइतेक्टोमी’ नाम दिइएको यो प्रविधि अपनाउँदा सहज, छिटो र स्तरीय तरिकाले मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया गर्न सम्भव भएको छ ।
पागल सपना !
डा. रुइतकै नेतृत्वमा स्थापना भएको हो तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान् । विश्वभरका उत्कृष्ट आँखा अस्पतालमध्ये एक हो तिलगंगा आँखा अस्पताल । सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तिलगंगामा उपचार गराउनका लागि विश्वका विकसित मुलुकबाट पनि बिरामी आउने गरेका छन् ।
तिलगंगा प्रतिष्ठान स्थापना गर्दा डा. रुइतसँगै थिए, हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्य, लेखक तथा अभियन्ता जगदीश घिमिरे र सगरमाथा आरोही शम्भु तामाङ ।
फरक–फरक क्षेत्रका व्यक्ति मिलेर प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुको कारण सुनाउँछन डा.रुइत, ‘विभिन्न क्षेत्रमा बसेर समाजमा राम्रो छाप पारेको मान्छे एक ठाउँमा ल्याउने योजना थियो । यही योजनाअनुसार जगदीश घिमिरे, हरिवंश आचार्य र शम्भु तामाङजस्ता मान्छेसँग जोडिन पायौं ।’
विशिष्टिकृत सेवा दिने आँखा अस्पतालको सपना डा. रुइतले नेपाल आँखा अस्पतालमा कार्यरत हुँदा नै देखेका थिए । तर, त्यहाँ उनी जुनियर डाक्टर थिए । त्यसैले उनको महत्वाकांक्षी सपना पूरा गर्न सघाउने कोही थिएनन् । नेपाल आँखा अस्पतालमा आउनु अगाडि डा. रुइत वीर अस्पतालमा कार्यरत थिए । जहाँ उनको क्षेत्र आँखा थिएन ।
डा. रुइतले आँखा अस्पतालमा काम गर्दा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियाको प्रभाव न्यून थियो । मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया जटिल थियो । शल्यक्रिया खर्चिलो पनि थियो । शल्यक्रिया पछि प्रष्ट आँखा देख्ने या नदेख्ने निश्चित थिएन् । शल्यक्रियापछि पनि मोटो चस्मा लगाउनुपथ्र्यो । मोटो चस्मा लगाएर पहाडतिर हिँड्डुल गर्न निकै कठिन थियो ।
‘शल्यक्रियापछि आँखाको समस्या झन् बल्झिने समस्या पनि थियो,’ डा. रुइत सम्झन्छन, ‘यसपछि मलाई के लाग्यो भने अमेरिका, अष्टे«लिया, युरोपमा हुने आँखाको सर्जरी हामी किन गर्न सक्दैनौं ?’
प्रश्नको जबाफमा जन्मियो तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान र रुइतेक्टोमी ।
यही प्रश्नको जबाफले उनलाई विश्वमै उदाहरणीय डाक्टर बनायो । एसियाको नोबेल पुरस्कार भनिने, रोमन म्यागसेसे पुरस्कार दिलायो । भारत सरकारले पद्य भुषणले सम्मान गर्यो ।
सात वर्षजति आँखा अस्पतालमा काम गरिसकेपछि डा. रुइत मोतियाबिन्दुको सहज शल्यक्रिया विधि खोज्न लागि परे । ७ वर्षको अनुभवमा उनले बुझिसकेका थिए, ‘मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया नेपाल सुहाउँदो छैन ।’
समस्या पत्ता लगाइसकेपछि अब समाधान खोज्नु थियो । समाधान खोज्न भन्दै डा. रुइत र उनको टोलीले करिब ५ वर्ष नेपालका कुना कन्दरामा आँखा शिविर चलायो । बिरामीका समस्या सुन्यो । त्यसपछि रुइतको टोली लेन्स प्रविधि विकास गर्नतिर लाग्यो ।
‘लामो समयको अनुभवपछि मलाई लाग्यो, हाम्रो एउटा व्यारिएर चाहिँ आँखामा हाल्ने लेन्सको मूल्य हो ।’ डा. रुइत भन्छन्, ‘त्यतिखेर मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियापछि प्रयोग गरिने लेन्सको म्रल्य ५ हजार रुपैयाँ थियो । लेन्सको मूल्य घटाउने एउटै विकल्प थियो, ‘लेन्स नेपालमै उत्पादन गर्ने ।’
तर, नेपालमै लेन्स उत्पादन गर्ने विषय भने चुनौतीपूर्ण थियो । रुइत सम्झन्छन, ‘लेन्स नेपालमै बनाउने कुरा सुरुमा त कसैले पत्याएनन् ।’
आँखा अस्पतालको परिधिमा बसेर लेन्स उत्पादन गर्न नसकिने महसुस गरे रुइतले । त्यसपछि आँखा अस्पताल छाडेर तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न अघि बढे । आँखा अस्पतालबाट बाहिरिँदा डा. रुइतसँग ६ जना स्टाफ र लेन्स बनाउने हुटहुटीबाहेक अरु केही थिएन ।
तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भन्दै पहिलो बैठक भयो जमलको रेष्टुरेण्टमा । प्रतिष्ठानको पहिलो बैठक सम्झन्छन् डा. रुइत, ‘पहिलो बैठकमा मैले आफ्नो आइडिया सुनाएँ । त्यसपछि एकजना बोर्ड मेम्बरले सोध्नुभयो, ‘यो काम गर्न हामीसँग स्रोत साधन के छ, जग्गा, पैसा ?’
हामीसँग केही प्नि थिएन् । हामीसँग बैंकमा जम्मा दुई सय डलर थियो । हामीसँग पागल सपना मात्रै थियो । त्यही सपनाबाट सुरु भएको हो यो सबै ।’
म्याड सपनाले मूर्त रुप लिँदै गएर सन् १९९४ मा तिलगंगा आँखा अस्पताल स्थापना भयो ।
नेतृत्व र टिम
नेपालमै लेन्स उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी सपना बोकेर आँखा अस्पताल छाडिसकेपछि डा. रुइतले तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान सुरु गरे । र, आज यो प्रतिष्ठान दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट आँखा अस्पतालको रुपमा परिचित छ ।
स्रोत साधनको अभावमा पनि कसरी सफल संस्था चलाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा डा. रुइत भन्छन्, ‘कुनै पनि मेजर मिसनमा महत्वपूर्ण कुरा उक्त मिसनमा आबद्ध व्यक्ति हुन् । त्यो मिसनलाई सफल पार्ने वा विफल पार्ने मिसनमा सामेल भएका व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ ।’
संस्था सफल बनाउन नेतृत्व र भिजन महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै डा. रुइत थप्छन्, ‘नेतृत्वकर्ताले संस्थाको भिजन सम्पूर्ण टिमलाई बाँड्नुपर्यो । टिमका सबै सदस्यलाई नेतृत्वको भिजनप्रति अपनत्व महशुुुस गराउन सक्नुपर्यो ।’
अहिले वार्षिक ३५ हजार लेन्स उत्पादन गर्छ तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानले । आफ्नो टिमप्रतिको विश्वास र भरोसाले नै तिलगंगालाई सफल बनाएको बताउँछन् रुइत ।
डा. रुइतले विकास गरेको प्रविधि अहिले विश्वभरका धेरै मेडिकल विश्व विद्यालयमा पढाइ पनि हुन्छ । सस्तो तर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिएको भन्दै अमेरिकी पत्रिका न्यूयोर्क टाईम्सले रुइतलाई विश्वकै दुर्लभ डाक्टरको रुपमा चित्रित गरेको थियो ।
डा. रुइतले आविष्कार गरेको प्रविधिअनुसार मोतिया बिन्दुको उपचार गर्दा २५ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च लाग्छ । र, मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियापछि चस्मा पनि लगाउनुपर्दैन ।
आफूले विकास गरेको प्रविधिको बारेमा रुइत भन्छन, ‘हामीले भइरहेको प्रविधिलाई थोरै मोडिफाई गरेर नयाँ बनाएका हौं । म्यानुअल तरिकाले मोतियाबिन्दुलई हटाएर गरेर लेन्स हालेर टाका लगाउन नपर्ने प्रविधि विकास गरेका हौं ।’
डा. रुइतले मोतियाबिन्दुको उपचारको सहज प्रविधि विकास गर्नु अगाडि नै इजरायलमा यो प्रविधि परीक्षण भइसकेको थियो । इजरायलबाटै प्रभावित भएर आफूले यो प्रविधि प्रयोग गरेको सुनाउँछन् डा. रुइत । ‘यो प्रविधिको सुरुवाती काम इजरायलमा एक जना डाक्टरले गर्थे । तर, उनले सानो क्लिनिकमा मात्रै काम गरेका थिए । हामीले यसलाई परिष्कृत गर्दै ठूलो समूहमा पुर्याएका हौ,’ डा. रुइतले भने ।
कुनै समय ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने मोतियाबिन्दुको उपचार खर्च अहिले आधा भन्दा धेरै घटेको छ । उपचार खर्च घटे पनि उपचारको गुणस्तर बढेको छ । आखिर यो कसरी सम्भव भयो त ?
डा. रुइतको जबाफ यस्तो छ, ‘हामीले गुणस्तरमा सम्झौता नगरी काम गर्यौं । हाम्रा बिरामी को हुन ? भनेर हामीले ख्याल गर्यौं । लेन्स र उपचारको गुणस्तर उच्च हुँदा पनि कम खर्च लाग्नुको कारण बीचमा कसैले खेल्न पाउँदैन ।’
अर्थात्, अस्पताल आफैंले लेन्स उत्पादन गर्छ अनि आफैंले बिक्री गर्छ । यसो गर्दा बिचौलियाले खेल्न पाउँदैनन् ।
एक्लोपनले बोध गराएको सामाजिकताको महत्त्व
ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा जन्मिएका डा. रुइत दार्जिलिङको स्कुलमा पढेका हुन् । दार्जिलिङको स्कुल पढ्दा लामो समय उनी एक्लै बस्नुपर्यो । चाड, पर्वमा स्कुल बिदा हुन्थ्यो, बिदामा रुइतका साथीहरु घर जान्थे । तर, रुइत भने होस्टेलमा एक्लै बस्थे । किनभने, उनको घर पुग्न १४ दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्थ्यो । स्कुले जीवनको एक्लोपनले नै आफूलाई सामाजिकता र सामूहिकताको महत्त्व बोध गराएको ठान्छन् डा. रुइत ।
स्कुले जीवनका एक्ला दिनमा आफ्ना प्रधानाध्यापकले खुबै सहयोग गरेको बताउँछन् उनी । ‘मेरो स्कुलका प्रिन्सिपलले मलाई धेरै माया गर्नुभयो । बिदाको बेला उहाँले मलाई काउन्सिलिङ गर्नुभयो । विभिन्न विषयको ज्ञान दिनुभयो । यसबाट मलाई जीवनमा अघि बढ्न ठूलो सहयोग मिल्यो,’ उनी भन्छन् ।
बाल्यकाल एक्लोपनमा बिताएका रुइतले बहिनी पनि गुमाउनुपर्यो । बहिनी गुमाएको पीडाले आज पनि उनलाई घोचिरहन्छ । त्यसैले त उनी भन्छन, ‘मान्छे जीवनमा दुःखले नै खारिने हो ।’
सामान्यतः डाक्टरी कामलाई प्राविधिक पेसा भनिन्छ । तर, डा. रुइत भने आफ्नो पेसालाई प्राविधिक मात्र मान्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘कामका हिसाबले यो प्राविधिक पेसा नै हो । तर, सबै जना प्राविधिक मात्रै हुने हो भने त केही हुँदैनन नि ।’
अर्थात्, पैसाभन्दा माथि उठेर सामाजिक नेतृत्व लिनुपर्ने उनको ठहर छ । उनी भन्छन्, ‘१/२ जना त प्राविधिकभन्दा माथि उठ्नै पर्छ । हामीले मानवीय हुनैपर्छ । डाक्टरी कोट खोलेर समाजसेवा गर्नुपर्छ । कहिले नेता बन्नुपर्छ । कहिले व्यवस्थापक बन्नुपर्छ ।’
तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानको नेतृत्वलाई सिसामा बसेको मान्छेको संज्ञा दिँदै डा. रुइत सुनाउँछन, ‘हामी त सिसाको बाकसमा बसेका मान्छे हौं । हामीले जे गरे पनि सबैले देख्छन् । त्यसैले हामी पारदर्शी हुनुपर्छ ।’
चिकित्साशास्त्रमा सबैभन्दा छिटो, सरल र सहज तरिकाले परिवर्तन ल्याउने विधा हो आँखा । डा. रुइत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि यही विधामा छन् । एक लाखभन्दा धेरै मान्छेको आँखाको शल्यक्रिया गरिसकेका डा. रुइत जिन्दगीसँग कुनै गुनासो नरहेको सुनाउँछन् । भन्छन, ‘जिन्दगीसँग गुनासो गर्ने फुर्सद नै छैन ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १४, २०७६, ०३:०१:००
#डा. सन्दुक रुइत
निरपेक्ष गरिबी १६.६७ प्रतिशत
एक वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ३६ अर्ब बढ्यो, एक नेपालीको टाउकोमा साढे ३८ हजार
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ लाख २६ हजार
सागर चन्द सागर चन्द
तेन्जिङले सगरमाथा चुम्नु २९ वर्षअघि नै सगरमाथा पुगेका थिए मेलोरी
स्तन करविरुद्धको नाङ्गेली विद्रोह !
‘यो राज्यसत्ता नै हाम्रो होइन’
आलमविरुद्ध संविधानसभा अदालत र निर्वाचन आयोगमा दर्ता उजुरी नै गायब
आलम पक्राउ गर्न काठमाडौंबाटै विशेष टोली
आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक : अर्थमन्त्री
चौरजहारी घटनालाई राजनीतिकरण हुन नदिने गृहमन्त्रीको प्रतिवद्धता
आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत
चौरजहारी घटनाको छानबिन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति
मिडियामा कोरोना कहरः न्युजिल्याण्डमा १ डलरमा बिक्री भयो मिडिया कम्पनी
भारतीय पत्रकारको दाबी : नेपालले टिस्टादेखि काँगडासम्म लिन सक्छ
भारतीयको अर्को चालबाजी– लिपुलेक नैै दुईवटा छन्
भारतीय प्राध्यापकले भने, ‘नक्सायुद्ध कसले सुरु गरेको ? नेपाल काश्मिर होइन’
१ करोड ७५ लाखको गाडी चढ्दै कर्णाली प्रदेशका सभामुख
कोरोना संक्रमितको सूचना नै गलत, कहाँ चुक्यो सरकार ?